Global Voices teny Malagasy · 20 Septambra 2013
20 Septambra 2013
Tantara tamin'ny 20 Septambra 2013
Fanofanana Voalohany Miaraka Amin'ny Ekipan'Onjam-peon'ny Dizha Kieru
Mediam-bahoaka 20 Septambra 2013
Tanana iray manana ny tambajotrana findainy manokana : Dizha Kieru, iray amin'ireo nahazo famatsiam-bola madinika amin'ity taona ity, dia nanao fanofanana momba ny fampiasana tsara kokoa an'ity teknolojia vaovao ity, rafitra fandefasana simaiso izay manome fahafahana an'ireo mpikambana anatina tobin'onjam-peo handefa hafatra an-tsoratra maimaim-poana mivantana any amin'ny findain'ireo mponina any amin'ny vohitra.
Azia Atsinanana 20 Septambra 2013
Gazety maro no nandika ilay lahateny ho 'vehivavy vendrana' sy 'andriambavilanitra vendrana' . Na izany na tsy izany, mila ny fifonan'ilay mpitarika ny Mpanohitra ireo vondrom-behivavy.
Mivondrona ny artista breziliana hanavotana ny liona any Kenià
Afrika Mainty 20 Septambra 2013
Ny artista breziliana dia manolotra ireo sanganasan'izy ireo ho an'ny hetsika fitadiavam-bola anohanana ny Tetikasa Ewaso Lions, izay natokana hanavotana ny liona any Kenià.
25 Taona Taty Aoriana, Mbola Mihelohelo an'i Iran Ny Famonoana Faobe Tamin'ny 1988
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Septambra 2013
Gadra politika an'arivony no naripaky ny fitondrana iraniana dimy amby roapolo taona lasa izay.
“Rehefa Tapitra Maty Ny Lehilahy Ao Tajikistan Vao Afaka Ny Ho FilohamPirenena Ny Vehivavy”
Azia Afovoany sy Kaokazy 20 Septambra 2013
Be ny fanantenana hahitan-javatra mandritra ny fifidianana ho avy eo fa tsy voatery hahasorena. Sambany eo amin'ny tantaran'ny firenena no misy vehivavy iray mifaninana ho amin'io toerana politika avo dia avo io.
Fokonolona Zapoteco Namoaka Tambajotram-Pinday Manokana
Tanana indizena ambanivohitra ao antendrombohitr'i Oaxaca niaraka amin'ny ONG Rhizomatica mba hisantatra tambajotran-tserasera na finday mahaleotena voalohany manerantany.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 Septambra 2013
Fa Maninona No Manosotra Varinesy Amin'ny Hohony Ireo Lehilahy Saodiana?
Manosotra varinesy amin'ny hohony ireo tovolahy Saodiana sady mampiseho ny volon-tongony ho fandraisany anjara amin'ny teny ifankahafantarana ao amin'ny Twitter midika hoe "Alaivo sary tahaka ny ataon'ny tovovavy ny tenanao".
Ejypta – “Toerana Mampidi-doza Ho An'ireo Mpanao Gazety”
Nandao an'i Ejypta ilay Ejypsiana bilaogera sady mpanao gazety Abdulmonem Mahmood, nilaza izy fa manahy ny amin'ny ainy.